२ माघ २०७४ मंगलबार Tuesday, January 16, 2018
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक यही माघ ४ गते बस्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यक्रम र प्रक्रियाका बारेमा पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई अवगत गराएको छ ।
प्रादेशिक राजधानी माग गर्दै धनकुटामा दुई दिनदेखि जारी आमहड्तालले त्यहॉको जनजीवन थप प्रभावित बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको डीपीआर आफैं बनाउने सेनाको निर्णय
मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण रहने भनिँदै आएको काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे)को कामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाली सेना स्वयंले बनाउने भएको छ ।
दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद
सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको छ । मनाङे स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका हुन् ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले पक्का
प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने पक्काजस्तै भएको छ । ऊसँग गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले सभामुख पदमा दाबी गरेको छ । यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको प्रस्ट बहुमत छ ।
नेपाल र बंगलादेश फाइनलमा भिड्‌ने
पोखरामा जारी १२ औं दक्षिण एशियाली सेभेन–ए–साइड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल र बंगलादेश भिड्ने भएका छन् ।
सरकारले कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि एकीकृत रुपमा दिगो योजना तयार गर्न बनाएको कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौता तयारी गरेको छ ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडले सोमबार राति इंग्लिस प्रिमियर लिगमा स्टोकमाथि सजिलो ३–० को जित निकालेको छ । म्यानचेस्टरका लागि एन्टोनियो भ्यालेन्सिया र एन्थोनी मार्टिएलल पहिलो हाफमा गोल गरे ।
दृष्टिविहीन वान डे विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत नेपालले सोमबार अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियालाई ८ विकेटले हराउँदै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ । यूएईस्थित अजमान मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अस्ट्रेलियाले नेपालसामु २ सय ९७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
राफेल नाडलले चोटको समस्याबाट मुक्त भएको संकेत दिँदै अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा सोमबार विजयी सुरुआत गरेका छन् । प्रतियोगिताको पहिलो दिन सोमबार अमेरिकी खेलाडीहरूका लागि खराब रह्यो । भेनस विलियम्ससँगै माथिल्लो वरीयताका खेलाडी पराजित हुँदै बाहिरिए ।
माघ महिना पहिलो दिन अर्थात माघेसंक्रान्ति । जाडोको चरम उत्कर्षको बेला । तर, सेतै कपाल फुलेका आधाबैशेहरु पनि हौसिएका छन् । जोसिएर हुलबाट हात ठड्याइरहेका छन् ।
भ्यात्त पेट निस्केका, मंगोलियन अनुहारका दयाहाङ राईलाई ‘लुट’ बाट निर्देशक निश्चल बस्नेतले गोप्ले चरित्रमार्फत आम चिनारी दिए । अझ अघि बढेर निर्देशक रामबाबु गुरुङले त दयाहाङलाई काजीको भूमिकामा ‘कबड्डी’ को हिरो नै बनाइदिए ।
फिल्म ‘लिलिबिली’ को रोमान्टिक गीतको भिडियो आएको छ । स्कटल्यान्डमा छायांकन गरिएको गीत ‘इज इट लभ...’ को भिडियो सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
सोनाम ल्होसारको बिदा पारेर बिहीबारै रिलिज गर्ने भनिएको फिल्म ‘पिँजडा ब्याक अगेन’ राजधानीमा भने शुक्रबार प्रदर्शनमा आउने भएको छ । फिल्म उपत्यकाबाहिर भने बिहीबारदेखि नै प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
पुष्कर शमशेरको कालजयी कथा ‘परिबन्द’ लाई रंगकर्मी प्रवीण खतिवडाले नाटय रूपान्तरण गरे । उनैले निर्देशन गरेको नाटकले प्रशंसा पायो । त्यही नाटक ‘सर्जमिन’ अहिले पूर्वका विभिन्न सहरमा मञ्चन भइरहेको छ । मण्डला थिएटर नेपालका कलाकारहरूद्वारा अभिनीत नाटक आइतबार र सोमबार परिवर्तन थिएटरको आयोजनामा झापाको धुलाबारीमा प्रदर्शन गरियो ।
ससुराली आएका युवकको हत्या
मकवानपुरको दुर्गम गाउँका दुई युवकले माघे संक्रान्तिमा ससुराली आएका एक युवकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेका छन् ।
दाङमा राजधानी माग्दै प्रदर्शन
जंगलको आगलागीमा दुईको मृत्यु
रोगप्रतिरोधक क्षमता बलियो भए हाम्रो शरीर थुप्रै संक्रमण र रोगबाट आफैं जोगिन सक्छ । अनि हामी स्वस्थ र बलियो भएर आनन्द साथ दीर्घजीवन बाँच्न सक्छौं । प्राचीनकालदेखि नै ऋषिमुनिले स्वस्थ भएर सय वर्ष बाँच्नका लागि विभिन्न आयुर्वेदिक र जीवनशैलीसम्बन्धी प्रक्रिया अपनाउन उपायहरू सुझाएका छन् । यसैले होला, रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउने उपायबारे आयुर्वेदले हजारौँ वर्षअघि वर्णन गरेको छ ।
सधैँ हवाईयात्रामा हुँदा दीर्घ रोग सक्न सक्छ । एउटा अध्ययनमा दाबी गरिए अनुसार, निरन्तर हवाईयात्रा जेट ल्यागको कारक बन्न सक्छ र हुँदाहुँदा यसबाट क्यान्सरको खतरा पनि बढ्न सक्छ ।
धूमपानले एकरत्ती फाइदा गर्दैन भन्ने सर्वविदितै छ । यो फोक्सोको क्यान्सरको प्रमुख कारक त हुँदै हो, त्यसअघि यो अम्मलले आन्द्रालाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ । हालै गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, धूमपानका कारण आन्द्रामा क्षति पुग्न सक्छ र त्यसै कारण कोलाइटिसको खतरा बढ्ने आशंका हुन्छ ।
जाडोयाममा घाममा बसेर अमिलो, गुलियो, रसिलो सुन्तला खाँदाको आनन्द हामी बिर्सन सक्दैनौं । यसको रस शताब्दियौँदेखि औषधीय गुणका लागि चिनिने गरेको छ । सुन्तला स्वास्थ्यवद्र्धक फल हो । उपवास र सबै रोगमा सुन्तला उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सीताका धेरै उपनामहरुमध्ये भूमिजा र मैथिली पनि हो । संस्कृत र संस्कृतिले सु–सज्जित मिथिलाको पौराणिक एवं वैज्ञानिक तथ्यहरु मैथिलीमा गुञ्जायमान छ ।
लिबियाको राजधानीमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लडाकूले आक्रमण गरेपछि सुरक्षाकर्मी र आतङ्ककारीबीच भएको झडपमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २० पुगेको छ । उक्त आक्रमणमा अन्य ६३ जना घाइते भएका छन् ।
भारत र इजरायलले दुई देशको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको जनाएका छन् । रक्षा, कृषि र नागरिक उड्ययन क्षेत्रबारे नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका इजरायली समकक्षी बेन्जामिन नेतान्याहुले यस्तो बताएका हुन् ।
आगामी फेब्रुअरीमा दक्षिण कोरियामा हुने शीतकालीन ओलम्पिक खेलमा उत्रेर कोरियाको सहभागिताको योजनाबारे दुई कोरियाबीच सोमबार वार्ता भएको छ । उक्त वार्ता दुई देशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पन्मुन्जोममा भएको हो ।
इराकको राजधानी बग्दादमा सोमबार गरिएका आत्मघाती बम आक्रमणमा कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रमण तीन दिनयता दोस्रो पटक गराइएको हो ।
प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण मध्यपूर्व शान्ति प्रयास जोखिममा परेको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । रमल्लाहमा विभिन्न राजनीतिक गुटको दुई दिने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
बाबाके सागर गैनु हा, मुरिया लाहनरानीके सिदुर छुटल पानी घाट, सखिए होमाघीको दिन । थारू समुदायका छोरीचेली बिहानै नदीमा नुहाउन जान्छन् र फर्केपछि बाबासँग विवाहका लागि केटा खोजिदिन अनुरोध गर्दै छोरीले यसरी गाउँछिन्– ‘बिहानै सागरमा नुहाउन गएँ तर सिन्दुर घाटमै छुट्यो ।’
अमेरिकाको नेभादा प्रान्तस्थित लस भेगासमा हालै सम्पन्न कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक शो (सिईएस) मा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरुको प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शित प्रविधिहरु धेरैका लागि काल्पनिक लागेपनि ति सबै वास्तविक हुन् । अधिकांश उत्पादनहरु नौलो र आश्चर्यजनक थिए । नयाँ प्रविधियुक्त स्मार्टफोनदेखि भविष्यमा ल्याइने पछिल्ला अविष्कारलाई समेत सिईएसमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
सन् २०१७ मा विभिन्न प्रविधिको विकास भए । ति सबै अगामी केही वर्ष शक्तिशाली नै रहने छन् । केहीले विश्वको अर्थव्यस्थालाई प्रभावित पार्ने छन् भने केहीले राजनीतिलाई । गत वर्ष औषधी विज्ञानका लागि पनि त्यति नै महत्वपूर्ण रहयो, थप औषधीहरु विकसित गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो ।
कृषि विभागले केके काम गर्छ ?, वैदेशिक रोजगार विभागमा कसरी सेवा लिने ? पासपोर्ट बनाउने फाराम कसरी भर्ने ? यिनै जानकारी सहितको सिंहदरबार एप सार्वजनिक भएको छ ।
के मानवनिर्मित बुद्धि भएको कृत्रिम यन्त्रले मान्छेलाई बेरोजगार बनाउन लागेकै हो रु यो प्रश्न पछिल्लो समय चर्चामा छ ।
गत वर्ष बंगलादेशको ढाकास्थित नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज बन्द भयो । त्यसको कारण थियो– सरकारी मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुनु । त्यो कलेज बन्द हुँदा २० नेपाली विद्यार्थीको भविष्य झन्डै अन्धकार बनेको थियो ।
केही समयअघिसम्म दु:ख हेर्न दोलखाको उत्तरी भेगमा जानुपर्छ भनिन्थ्यो, अहिले राम्रा अवसरका लागि त्यता जानुपर्छ ।
पुस महिनाको ठिहिऱ्याउने चिसो । त्यसमाथी मध्यरात । ओछ्यानको तातो छोडेर को नै बाहिर निस्केला र ? तर यर्थाथ यस्तो छैन् । सिंगो उपत्यकाका अधिकांश मान्छे सुतेपनि राजधानीका तीन जिल्लामा मध्यरातमा निस्फिक्री हिडडुल गर्नेको ठुलो संख्या छ । मध्यरातमा मदिराको नसामा चुर भएर हो हल्ला गर्दै हिड्नेहरुको कमी छैन ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने र विदेशी डिग्री लिएर उतै उद्यम गर्ने वा जागिर खाने अधिकांश नेपाली विद्यार्थी को सपना हो । स्वदेशी कलेज र पाठयक्रम भन्नासाथ हेयका दृष्टिकोणले हेर्ने आमप्रवृत्तिले प्राय: विद्यार्थीको रोजाइ विदेशी डिग्री, विदेशी काम बन्ने गरेको हो ।
माघे संक्रान्तिको दिन सोमबार साँझ ५ नबज्दै चितवनको नारायणी नदी किनार दर्शकमय बन्यो । दाताज इभेन्ट म्यानेजमेन्टले दर्शक जम्मा गर्ने काम गरेको थियो । त्यो पनि नेपालको चर्चित सांगीतिक समूह नेपथ्यलाई निम्ताएर । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म नेपथ्यको सांगीतिक प्रस्तुति हेर्न जम्मा भएका थिए । गायक अमृत गुरुङले जोशीलो पारामा गीत गाउँदै दर्शकलाई साँझ ८ बजेसम्म झुमाए । दर्शकदीर्घा एकोहोरो नाचिरह्यो ।
स्वस्थानी व्रत कथासँगै सुरु हुने माधव नारायण पर्व पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्ने गर्दछ । उक्त अवधीमा श्रद्धालुहरु भक्तपुरको हनुमानघाट लगायत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न तीर्थस्थल तथा नदीहरुमा गएर नुहाई पवित्र भएर माधव नारायणको उपासना गर्ने गर्दछन् । सोही परम्परा अनुसार आज व्रतालुहरुले पशुपतिको बागमतीमा नदीमा स्नान गरेर पुजा गरेका छन् ।
रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक तिर्थस्थल वेत्रावतीमा माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा १० हल गोरुले मैदानमा प्रतिष्पर्दा गरेका छन् ।
उपत्यकामा बसोबास गर्ने थारु समुदायले टुंडिखेलमा जम्मा भएर सोमबार माघी मनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याएर मनाइएको माघी कार्यक्रममा थारु संस्कृति प्रदर्शन गरिएको छ ।
धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र तथा पवित्र तीर्थस्थल चितवनको देवघाटमा सोमबार माघे सक्रन्ति मेलाका लागी भक्तजनको घुँइचो लागेको छ । सोमबार बिहानै देखि देशभर र भारतबाट समेत आएका भक्तजनहरुले स्नान गर्ने र पूजाआजा गर्ने क्रम जारी छ ।
बुटवलको तिनाउ तीरको सुविधासम्पन्न बस्तीको एउटै समस्या हो— लालपुर्जा । सरकारी कागज, पुर्जा नभए पनि यहाँ घरजग्गा कारोबारमा कुनै कमी छैन । घरजग्गाको मूल्य सुन्दा एकपटक विश्वास लाग्दैन । ...
अघिल्लो साता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४३ औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भयो । त्रिविका ६० आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका ६० हजार बढी दीक्षित हुन योग्य ...
कक्षामा पढ्न कत्तिको जाँगर चल्छ ? कि सधैं किताब मात्र पढ्दा दिक्कै लाग्छ ? कहिलेकाहीँ शिक्षकशिक्षिकाले कथा वा गीत सुनाएर रमाइलो गराउनुभएकै होला । मैदानमा लगेर विभिन्न खेल पनि ...